Chelsea & Man United Oo Lagu Garaacay Xiddig Mucjiso Ah, Arsenal Oo Heshay Tiir Adag Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka |
HomeCiyaarahaChelsea & Man United Oo Lagu Garaacay Xiddig Mucjiso Ah, Arsenal Oo Heshay Tiir Adag Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka
Chelsea & Man United Oo Lagu Garaacay Xiddig Mucjiso Ah, Arsenal Oo Heshay Tiir Adag Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Iibka
Suuqa kala iibsiga qaarada Yurub ee bisha January ayaa si rasmi ah u furmay maadaama oo la galay bisha January ee sanadka cusub ee 2021 iyadoo ay kooxaha qaaraasyo isha ku hayaan inay fuliyaan qorshayaashii ay dhigteen suuqa kahor.
Kooxaha reer Yurub ayaa isku dayi doona inay dhaq-dhaqaaqa ugu macquulsan ka sameeyaan suuqan xilliga qaboobaha iyagoo ogsoon inuusan ahayn suuq u balaadhan sida midka xagaaga isla markaana ay adagtahay in saxeexyo waaweyn la sameeyo xilli ciyaareedka oo badhtanka maraya.
Intaas waxa dheer in isku dayada kooxaha Yurub uu sii xadidayo saamaynta dhaqaale ee uu caabuqa Korona Fayras ku yeeshay kooxahaas.
Si kastaba, sidii aan nooga barateen waxa aanu halkan idinkula wadaagaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xanta ahaa iyo hadal haynta suuqa ka jirta ee ay qoreen wargeysyada ugu waaweyn Yurub maanta oo Isniin ah.
Tottenham ayaa doonaysa inay lasoo saxeexato difaaca reer Brazil ee Eder Militao oo ah 22 jir u ciyaara Real Madrid, kaas oo sidoo kale ay amaah ku doonayaan naadiyada Roma, AC Milan iyo Inter Milan. Laakiin Spurs ayaa u raacinaysa inay iibsan doonto marka amaahdu dhamaato. (Corriere dello Sport)
Jose Mourinho ayaa go’aamiyey in kooxdiisu ay kula biirto Leeds United iyo Juventus tartanka ay ugu jiraan garabka weerarka kooxda Stuttgart ee Nicolas Gonzalez oo 22 jir ah, iyadoo laacibkan reer Argentina uu bartilmaameed yahay suuqa xagaaga ee soo aaddan. (Athletic)
Harry Winks oo dhexda uga ciyaara Tottenham ayaa waxa amaah ku doonaysa Valencia. (Football London)Moises Caicedo oo Manchester United ay si weyn u doonaysay ayaa waxa qarka u saaran inay la saxeexato Brighton oo kaga hor martay Newcastle United iyo Man United intaba. Laacibkan ayaa u ciyaara naadiga Independiente del Valle. (Talksport)
Chelsea iyo Manchester United waxay ku dagaallamayaan sidii ay ugu guuleysan lahaayeen saxeexa 19 jirka Caicedo oo lagu tilmaamo mucjiso dunida kusoo socota. (Daily Mail)
Arsenal waxay danaynaysaa inay lasoo saxeexato 24 jirka khadka dhexe uga ciyaara Brighton ee Yves Bissouma oo u dhashay waddanka Mali. (Football London)
Xiddiga Faransiiska ah ee ku guuleystay Koobka Adduunka ee Steven N’Zonzi ayaa soo gaabin karaya heshiiska amaahda ah ee uu kula joogo Rennes, sababtoo ah kooxaha Arsenal iyo Everton ayaa doonaya inay si rasmi ah ugala wareegaan AS Roma. (Foot Mercato)
Weeraryahanka reer France ee Moussa Dembele ayaa qarka u saaran inuu ku biiro Atletico Madrid, kaddib markii ay labada kooxood isku waafaqeen inay kula kala wareegaan amaah inta ka hadhay xili ciyaareedka ah iyo in xagaaga ay Atletico si rasmi ah u qaadato iyadoo bixinaysa lacag dhan £29.6 milyan oo Gini. (Goal)
Arsenal waxay eryanaysaa saxeexa laacibka khadka dhexe uga ciyaara Norwich City ee Emi Buendia, iyadoo 24 jirkan la sheegayo in lagu heli karayo £40 milyan oo Gini. (Express)
Tiemoue Bakayo oo khadka dhexe ka ciyaara ayay Chelsea go’aamisay inay si rasmi ah uga iibiso Napoli. (Star)
Juventus ayaa wada-hadallo kula jirta Sassuolo oo ay ka doonayso weeraryahanka 22 jirka ah ee u dhashay Talyaaniga ee Gianluca Scamacca oo waqtigan amaah ugu maqan Genoa. (Goal)
Difaaca reer France ee u ciyaara RB Leipzig ee Dahyot Upamecano oo 22 jir ah ayay doonaysaa Bayern Munich, laakiin waxa kale oo iyaguna doonaya inay la saxeexdaan Chelsea iyo Manchester United. (Marca)